Hello Nepal News » यसकारण आउँछ हाम्रो आँखाबाट आँसु
यसकारण आउँछ हाम्रो आँखाबाट आँसु
दुःख वा खुसीको क्षण, पीडा वा चोट । यी समयमा हाम्रा आँखा रसाउँछन् । हाम्रो मन–हृदयले पीडा वा खुसी अनुभूत गर्दा हाम्रा आँखा रसाउने गर्छन् । कहिलेकाहीं हामीलाई के भएको छ भन्ने थाहा नहुँदै पनि आँखाबाट आँसु चुहिएको हुनसक्छ । अनि हामीलाई लाग्छ– मेरा आँखा किन रसाए ? किन आँसु आयो ?
आखिर हाम्रा आँखामा आँसु किन आउँछ ? कसरी आउँछ ? यसको खास वैज्ञानिक कारण छ । हाम्रो आँखामा ‘आइलिड’ हुन्छ, जहाँ आँसु उत्पादन गर्ने ग्रन्थी हुन्छ । र, आँखाछेउको तल–माथि दुवैतिर प्वाल हुन्छ । सोही ग्रन्थीले आँसु उत्पादन गर्छ । र, प्वालबाट बाहिर आउँछ । आँखाको सेतो भागमा पनि यसरी नै पानी सप्लाई हुन्छ ।
यसबाहेक नाकलगायत शरीरका अन्य भागमा पनि प्वालका माध्यमबाट पानी सप्लाई हुने गर्छ । जब त्यस्ता प्वाल वा पानी सप्लाई गर्ने नली साँघुरो हुन्छ वा टालिन्छन्, अनि आँखाबाट पानी बग्न थाल्छ, जसलाई हामी आँसु बगेको भन्छौं । आँसु बग्नुको सबैभन्दा सही र वैज्ञानिक कारण यही हो ।
आँसुमा हुने पदार्थ जस्तै– नुन, तेलको ब्यालेन्स नमिल्दा पनि आँखाबाट अनावश्यक पानी बग्ने गर्छ । जसका कारण हाम्रो आँखा सुक्खा हुने समस्या पनि हुन्छ । बेला–बेला धूवाँ तथा पिरो वस्तु आँखामा पर्दा पनि आँसु आउँछ । प्याज काट्दा पनि त्यसको रागले आँसु बग्छ ।
खास गरी, जाडो मौसममा चल्ने हावाले आँखाको तरल पदार्थलाई बाफ बनाएर उडाउँछ । र, आँखाबाट आँसु आउने गर्छ । यसो हुँदा पनि आँखा सुक्खा हुँदै जान्छ । आँसु बगेपछि आँखा सुक्दा हुन्छ । आँखाबाट पानी बग्नु नियमित प्रक्रिया भएकाले मानिस बाँच्दासम्म आँसु पनि बगिरहन्छ ।
प्रकाशित मिति २१ जेष्ठ २०७७, बुधबार ०८:१०